ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လိင်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ ပန်းချီဆရာ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး လိင်ပြောင်းဖို့ ကြိုးစားခဲ့သူ ပန်းချီဆရာ	Posted by mm thinker on August 13, 2016
Posted in: Art, Article, ကေတီကေ, Biography, Movie, Uncategorized.	Tagged: Art, Article, ကေတီကေ, Movie.	Leaveacomment
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ပြီး လိင်ပြောင်းဖို့ ပထမဆုံး ကြိုးစားခဲ့သူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၈၀ လောက်က ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၊ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့နေ အိုင်နာ ဝဂ္ဂနာ ဆိုတဲ့ ရှုမျှော်ခင်းရေးဆွဲသူ ပန်းချီဆရာ တဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူနဲ့ သူ့ရဲ့ဇနီး ပုံတူရေးဆွဲသူ ပန်းချီဆရာမ ဂါဒါ ဝဂ္ဂနာ တို့ရဲ့ အကြောင်း စိတ်ဝင်စားစရာ သိမ်မွေ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းကို The Danish Girl ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ ကြည့်ရှုခံစားရမှာပါ။
ဒေးဗစ် အက်ဗာရှော့ဖ် (David Ebershoff) ရေးသားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဝတ္ထုကို ပြန်ရိုက်တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ကားဟာ အကယ့်အဖြစ်တွေနဲ့ အတွင်းရေးတွေမှာ ကွဲလွဲမှု တချို့ ရှိတယ်လို့ ဝေဖန်ခံရပေမယ့် စိတ်ဝင်စား အားပေးမှု ခံရတဲ့ ဇာတ်ကားတကား ဖြစ်ပါတယ်။
ပန်းချီဆရာမ ဂါဒါ (သရုပ်ဆောင် အဲလီစီယာ ဗီကန်ဒါ) ဟာ လက်စမသတ်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မိန်းမပုံ ပန်းချီကား တကားအတွက် သူ့ ယောက်ျားဖြစ်သူ ပန်းချီဆရာ အိုင်နာ ဝဂ္ဂနာ (သရုပ်ဆောင် အက်ဒီ ရက်မိန်း) ကို မော်ဒယ် ထိုင်ခိုင်းပါတယ်။ ၁၉၂၀ ဝန်းကျင်မှာ ဂါဒါရော အိုင်နာပါ အတော်အတန် နာမည်ရ ပန်းချီသမား၊ သရုပ်ဖော် ပန်းချီရေးသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
အဲဒီက စပြီး အိုင်နာဟာ သူ့ဇနီး ဂါဒါ ပန်းချီရေးဖို့ အတွက် မော်ဒယ်အဖြစ် တော်တော်များများ ထိုင်ပေးခဲ့ပြီး ပန်းချီကားထဲက မိန်းမပုံကိုတော့ အိုင်နာရဲ့ ညီမ “လီလီ အယ်လ်ဘီ” လို့ နာမည် ပေးထားလိုက်ကြပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အိုင်နာဟာ ယောက်ျားဘဝ “အိုင်နာ” နဲ့ ပန်းချီကားထဲက မိန်းမဘဝ “လီလီ” ဆိုပြီး ဘဝ နှစ်ခုကို စတင် တွေ့ရှိလာပါတယ်။ အိုင်နာဟာ လီလီအဖြစ် အမျိုးသမီး အဝတ်အစားတွေ ဝတ်ရတာကို သာယာလာပြီး အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လှပမှု၊ နွဲ့နှောင်းမှု၊ ပျော့ပြောင်းမှုတွေကို စတင် သတိပြု လေ့လာနေမိပါတယ်။ အိုင်နာဟာ တကိုယ်တည်းမှာ စိတ်နှစ်ခု ဖြစ်လာပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူ ဂါဒါကလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အိုင်နာနဲ့ လီလီတို့ နှစ်ကိုယ့်တစိတ် ဖြစ်နေမှုကို ခွဲထုတ်ဖို့ ကြိုးစားလာရပါတော့တယ်။
အိုင်နာနဲ့ ဂါဒါဟာ ကိုပင်ဟေဂင်ကနေ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီကို ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဂါဒါရဲ့ “လီလီ” ပန်းချီကားတွေဟာလည်း စိတ်ဝင်စားမှု ခံရပြီး အဝယ်လိုက်လာပါတယ်။ “လီလီ” ဟာ အပြင်မှာရှိတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပြီး လီလီကို တွေ့မြင်ချင်သူတွေလည်း ရှိလာပါတယ်။ ပါရီမှာ လာဆုံရတာကတော့ လီလီကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပန်းချီကား အရောင်းအဝယ်လုပ်သူ ဟန့်စ် အက်စ်ဂီးလ် (သရုပ်ဆောင် မက်သီယာစ် ရှိုအင်နာ့စ်) ဖြစ်ပါတယ်။
ဟန့်စ်နဲ့ လီလီရဲ့ မူမမှန်တဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ဂါဒါကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေပါတယ်။ အိုင်နာကလည်း လီလီဆိုတဲ့ မိန်းမဘဝကို ပိုတက်မက်လာပြီး သူဟာ မိန်းမသာ ဖြစ်ပြီးတော့ မှားယွင်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲကို ဝင်ရောက်နေရတာ ဖြစ်လို့ ယုံကြည်လာပါတယ်။ ဂါဒါကတော့ လီလီဟာ တကယ်မရှိဘူး၊ အိုင်နာဟာ သူ့ခင်ပွန်းအစစ် ဖြစ်တယ်၊ လက်မလွှတ်နိုင်ဘူးလို့ တကယ့် လက်တွေ့ဘဝကို ဆွဲခေါ်ဖို့ အမျိုးမျိုး ကြိုးစားပေမယ့် အရာမထင်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးမှာ ဂါဒါဟာ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အိုင်နာကို စိတ်အထူးကုဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြသကြည့်ပေမယ့် ရေရေရာရာ အဖြေ မရပါဘူး။ ဟန့်စ်ရဲ့ အကြံပေးမှုနဲ့ လီလီတဖြစ်လဲ အိုင်နာနဲ့ ဂါဒါဟာ ဆရာဝန် ဒေါက်တာ ကာ့တ် ဝါနာခရော့စ်နဲ့ တွေ့ကြပါတယ်။ ဒေါက်တာ ဝါနာခရော့စ်က သူ ဒီလို လူနာတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးကြောင်း၊ လီလီလိုမျိုး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိန်းမထင်နေပြီး ဘဝသစ်ကို လိုချင်နေကာ အဖြေတခု ရှာနေသူမျိုးတွေ ဖြစ်ကြောင်း၊ ယောက်ျားကနေ မိန်းမအဖြစ်ကို ပြောင်းပေးမယ့် လိင်ပြောင်းခွဲစိတ်မှုကို ခံယူရမယ့် နည်းလမ်း ရှိကြောင်း ပြောပါတယ်။
ခွဲစိတ်ရမယ့် အစီအစဉ်က ၂ ပိုင်းပါ။ ပထမက အိုင်နာရဲ့ ကျားအင်္ဂါကို ခွဲထုတ်ပစ်ရမယ်၊ ခွဲထုတ်ပြီးလို့ ပြန်ပြီး နာလန်ထလာပြီဆိုရင် အမျိုးသမီးဖြစ်အောင် ထပ်ပြီး ခွဲစိတ်ပေးဖို့ပါ။ ဒေါက်တာ ဝါနာခရော့စ်က တခါတည်း သတိပေးထားတာကတော့ ဒါမျိုး ခွဲစိတ်မှု တခါမှ မလုပ်ဖူးတာကြောင့် အလွန် အန္တရာယ်များကြောင်း၊ လီလီ ခေါ် အိုင်နာဟာ ပထမဆုံး စမ်းသပ်ခွဲစိတ်ခံယူရမယ့်သူ ဖြစ်ကြောင်းပါပဲ။
လီလီကတော့ မဆိုင်းမတွ သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူဖို့ အိုင်နာ ခေါ် လီလီဟာ ဂျာမနီကို ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အိုင်နာဟာ သူ့ရဲ့ ကျားအင်္ဂါ ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားမှု လုပ်ပြီးနောက်မှာ အကျိုးဆက်အဖြစ် ရှုပ်ထွေးတဲ့ အကျိုးဆက် ဝေဒနာတွေကို ခံစားလာရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ လီလီတဖြစ်လဲ အိုင်နာဟာ ခွဲစိတ်ကုသမှုရဲ့ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် နောက်ပိုင်းမှာ သေဆုံးသွားရပါတယ်။
သူ့ကို သူပန်းချီရေးဆွဲဖူးတဲ့ ရူမျှော်ခင်းကားထဲက သစ်ပင်တွေအောက်မှ မြှုပ်နှံလိုက်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ The Danish Girl ရုပ်ရှင်ဟာ အဖြစ်မှန်နဲ့ ကွဲလွဲမှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေ ရှိတာကြောင့် ပန်းချီဆရာ အိုင်နာ ဝဂ္ဂနာ ခေါ် လီလီ အယ်လ်ဘီ (၁၈၈၂-၁၉၃၁) ရဲ့ တကယ့် ဘဝဖြစ် အနည်းငယ်ကို ဇာတ်ကြောင်း လှန်ချင်ပါသေးတယ်။
အိုင်နာဟာ ကိုပင်ဟေဂင်ရှိ ပန်းချီအနုပညာ တော်ဝင်ဒိန်းမတ် အကယ်ဒမီ ကျောင်းဆင်းဖြစ်ပြီး ဇနီးဖြစ်လာမယ့် ဂါဒါ ဂေါ့တလစ်ဘ် နဲ့လည်း အဲဒီကျောင်းမှာ ဆုံခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးဟာ စာနယ်ဇင်း သရုပ်ဖော်ပုံတွေလည်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပြီး အီတလီ၊ ပြင်သစ်တို့ကိုလည်း သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပါရီမှာ ၁၉၁၂ ခုနှစ်မှာ အခြေချခဲ့ကြပြီး အိုင်နာက လီလီဆိုတဲ့ မိန်းမအဖြစ် ဂါဒါက လက်စဘီယန် အဖြစ် နေထိုင်ကြပါတယ်။
၁၉၃၀ မှာတော့ လီလီဟာ လိင်ခွဲစိတ်ဖို့ ဂျာမနီကို သွားရောက်ပြီး ၂ နှစ်အတွင်း ခွဲစိတ်မှု ၄ ခါ ခံယူခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကို ပထမပိုင်း ခွဲစိတ်ပေးတာက ဘာလင်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန် မက်ဂနက် ဟာ့ခ်ျဖီးလ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ခွဲစိတ်မှုကိုတော့ ဒရက်စ်ဒင် မြူနီစပယ် အမျိုးသမီး ဆေးရုံက ဒေါက်တာ ကာ့တ် ဝါနာခရော့စ် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ခွဲစိတ်မှုတွေ ခံယူနေချိန်မှာ လီလီရဲ့ အကြောင်းဟာ ဒိန်းမတ်နဲ့ ဂျာမနီ သတင်းစာတွေမှာ အကဲဆတ်တဲ့ သတင်းတခု ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ လီလီဟာ တရားဝင် မိန်းမနာမည် ပြောင်းလိုက်ပြီး ပန်းချီလည်း မဆွဲတော့ပါဘူး။
လီလီဟာ ပြင်သစ် ပန်းချီကား ရောင်းဝယ်သူ ကလောက် လေယန်းနဲ့ ချစ်ကြိုက်ခဲ့ပြီး သူ့ကို လက်ထပ်ကာ ကလေးယူဖို့ အထိ စဉ်းစားထားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ လီလီဟာ သားအိမ် ခွဲစိတ်ဖန်တီးဖို့နဲ့ မအင်္ဂါ ဖန်တီးပေးဖို့အဆင့် ရောက်နေပါပြီ။ အဲဒီလိုမျိုး ခွဲစိတ်ပေးရေးဆိုတာ အဲဒီခေတ်မှာတော့ တကယ့် ပထမဆုံး ကြိုးပမ်းမှု ဖြစ်ပါတယ်။
ကံမကောင်းစွာပြီး သားအိမ်ခွဲစိတ်ပေးတာကို လီလီ့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ စနစ်က လက်မခံဘဲ ကူးစက်ရောဂါ ဝင်ခဲ့ကာ ၃ လအကြာ ၁၉၃၁ စက်တင်ဘာ ၁၃ မှာ သေဆုံးသွားပါတယ်။
လီလီထက် အရင် ဒိုရာ ရစ်ခ်ျတာ ဆိုသူဟာ လိင်ခွဲစိတ်မှု လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ဒရက်စ်ဒင် ဆေးရုံဟာ မဟာမိတ်တွေရဲ့ ဗုံးခွဲမှုကြောင့် စာရွက်စာတမ်းတွေ ပျောက်ဆုံးပြီး အငြင်းပွားစရာတွေ ဖြစ်နေဆဲပါ။
လီလီရဲ့ သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစာအုပ် “ယောကျာ်းမှ မိန်းမသို့” (Man into Women) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ဟာ ၁၉၃၃ မှာ ထွက်ရှိပါတယ်။
လီလီဟာ ခွဲစိတ်မှု ခံယူချိန် ၁၉၃၀ မှာ အသက် ၄၇ နှစ် ရှိနေပြီး နောက်တနှစ်မှာ သေဆုံးပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ အသက်က ၃၃ နှစ်အရွယ် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဂါဒါကလည်း အသက် ၄၃ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်ပေမယ့် ရုပ်ရှင်ထဲမှာက ၂၆ နှစ် အရွယ်မှာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပါရီကို သူတို့ ပြောင်းရွှေ့ချိန်ဟာ ၁၉၁၂ ဖြစ်ပြီး အိုင်နာက ၃၀၊ ဂါဒါက ၂၆ ပါ။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာက ၂၀ ကျော် အသက်အရွယ်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ လီလီရဲ့ နာမည် အရှည်ကလည်း ရုပ်ရှင်ထဲကလို လီလီ အယ်လ်ဘီ မဟုတ်ပါဘူး၊ လီလီ အိုက်လ်စ် အယ်လ်ဗင်နက်စ် ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဂါဒါ ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ မိန်းမချင်း ချစ်ကြိုက်မှု လက်စဘီယန် ရေးဆွဲဖန်တီးမှု ကားတွေကို ဖော်ပြမထားပါဘူး။ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ လီလီ ခွဲစိတ်ကုသပြီးချိန်နဲ့ သေဆုံးချိန် လာရောက်တယ်ဆိုတာကလည်း မှားနေပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဂါဒါဟာ နောက် အိမ်ထောင်နဲ့ အီတလီမှာ ရောက်နေပါတယ်။ ဂါဒါဟာ သူ့ နောက်အိမ်ထောင် ဖာနန်ဒို ပေါ်တာနဲ့လည်း ၁၉၃၆ မှာ ကွာရှင်းပြီးနောက် အိမ်ထောင် ထပ်မပြုတော့ပါဘူး။ အဲဒီနောက်မှာ ဒိန်းမတ်ကို ပြန်သွားပြီးပြီး အရက် အလွန်အကျွံ သောက်ကာ ဆင်းဆင်းရဲရဲနဲ့ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက ဟန့်စ်ဆိုတာကတော့ တကယ်မရှိခဲ့ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
မင်းသမီး ဂါဒါ အတွက် သရုပ်ဆောင်ဖို့ နေရာမှာလည်း မရိုက်ကူးခင်ကတည်းက အပြောင်းအလဲ များစွာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး လျာထားတာက ချားလစ် သီယွန်ပါ။ သူက မရိုက်ဖြစ်တော့ ဂွင်းနက် ပက်ထရိုကို ထပ်ရွေးပေမယ့် မရိုက်ဖြစ်ပြန်ပါဘူး။ အူမာ သာမန်၊ မာရီယွန် ကော့တေးလ်လာ့ဒ်၊ ရေချယ် ဝိုက်ဇ် ဆိုပြီး တယောက်ပြီးတယောက် သတင်းထွက်၊ ညှိနှိုင်းကြပြီးမှ အလီစီယာ ဗီကန်ဒါနဲ့ ရိုက်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ စတင်ပြသခဲ့တဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ၇၂ ကြိမ်မြောက် ဗင်းနစ် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာလည်း ပွဲဦးထွက် ပြသခဲ့ပါတယ်။
LGBT တွေဟာ MIX ကိုပင်ဟေဂင် ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာ “လီလီ” ရဲ့ အမည် အယ်လ်ဘီ နဲ့ ဆု ၄ ခု ချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေးဗစ် အက်ဘာရှော့ဖ်ရဲ့ The Danish Girl စာအုပ်ဟာလည်း ဘာသာပေါင်းများစွာကို ပြန်ဆိုခြင်း ခံရပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကား The Danish Girl ကို ကာတာ၊ အာရပ်စော်ဘွားများ ပြည်ထောင်စု၊ အိုမန်၊ ဘာရိန်း၊ ဂျော်ဒန်၊ ကူဝိတ်နဲ့ မလေးရှားတို့မှာ ပြသခွင့် ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။
← Water Color – undated	Kay Moe Ko’s 2nd Solo Show →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Myanmar Sar	Blog Stats	255,104 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Blog at WordPress.com.